3D Vamp Tolidda Machine - Shiinaha Ningbo Samewe Computer
Gallary of Muunado Tolidda
3D Vamp Tolidda Machine
3D Vamp Tolidda Machine waxaa loogu talagalay iyo in la horumariyo, waayo fikradda 3D cusub ee kabaha sports-xidhka, mashiinka 3D Vamp Tolidda leeyahay hawlaha tolida hal mar, goynta laayeen, wax taaj oo kale oo ku sii kordhaya dareenka stereopsis of uppers kab. technology wasakhahaasi Tani qalabka dhaqanka galay qaabka daran 3D marayo barnaamijyo caaqil, waxa ay leedahay sifooyinka of warshadaha fudud ...
3D Vamp Tolidda Machinewaxaa loogu talagalay iyo in la horumariyo, waayo fikradda 3D cusub ee kabaha sports-xidhka, mashiinka 3D Vamp Tolidda leeyahay hawlaha tolida hal mar, goynta laayeen, wax taaj oo kale oo ku sii kordhaya dareenka stereopsis of uppers kab. Technology wasakhahaasi Tani qalabka dhaqanka galay qaabka daran 3D marayo barnaamijyo caaqil, waxa ay leedahay sifooyinka of habka fudud wax soo saarka, dabacsanaan sare, kharash yar iyo wax taaj oo degdeg ah. Technology Tani ma aha oo kaliya gaaro saamaynta ka fiican tahay farsamooyinka soo jireenka ah, laakiin sidoo kale koobaya muddada horumarinta muunad.
nooca 3D Vamp Tolidda Machine
tolida Width stroke variable, max 52 "(132cm)
Speed ​​tolida Max ee 1.2 / sec, 24 heerka xawaaraha hagaajin, barnaamijkii tilmaamaha.
Mugga Tolmada Stepping drive motor, daafigaw ganaax ah halkii qaybta 0-650
xirtey AC Howlsocodsiinta drive motor, Max 1-inch xirtey. 1/4, 1/2, 3/4 garoonka iyo shaqada wanaagsan-daafigaw ka boos kasta laga heli karo.
System tolida Single qaadee | Saddex-nidaamka.
texeen Saddex xagalka design ayaa farcan. Nidaam kasta ee oofin karin dabamariyey, Xooji, iyo ma-tolida isku mar, sidoo kale hore u gudbaayo gadaal, gadaal horteeda ama labadaba hore iyo xagga dambe aan la xadidayn toos ah.
Xulashada irbad nidaamka kasta wuxuu leeyahay 8 nooc selectors irbad casri ah, taas oo lagu rakibi karo ama laga saaro si fudud ka qaadee iyo dayactiro si fudud.
irbad Bar cirbadaha bir ayaa la geliyo on sariirta irbadda, qaybo ka mid ah waxaa lagu beddeli karaa marka jebisay
System wax aanjirin tilmaamaha barnaamijkii iyo drive motor elektaroonik ah, isbedel 24 heerar.
Drive System Gacanta ku AC Howlsocodsiinta Motor, suunka-kexeeyey, 24 heerka xawaaraha selectable iyo hagaajin karo heer kasta.
sidayaal dun 2 * 8 sidayaal dun dhinac kasta ee 4 biraha guide, switchable meelaha gudahood width tolida ah.
Jooji dhaqdhaqaaq Nasasho dun, gunti waaweyn, dhar-saxaafadeed-off, irbad dillaacin, in ka badan-Xuddunta, dib u diidanaa, xirtey Baadi, meel aan habboonayn ee lagu niinaaso, dun xad-dhaaf ah ama gaarey on bartilmaameed wax soo saarka.
Unit computer Tafatirka suurto gal samayn via hawlgalka bandhigay guddiga, screen LCD in uu soo bandhigo xogta.
Capacity Memory 1024 * 4096, width ama cimri dheer qaababka laga beddeli karaa.
Data Kaydinta aqbasho USB
Luqadaha Display Shiinaha iyo English. (The luqado kale la doonayo waxa laga heli karaa)
Power 3-waji AC, 220V
Capacity Factor 2.0 kw / mashiinka
Cabirka Length x Width x Heights
290 x 90 x 200cm (52 ​​"Taxanaha Net Miisaanka - Qiyaastii 1000kg)
Previous: SY52-3S Saddex-System
3D Flat Tolidda Machine
3D Flyknit Tolidda Machine
3D mesh Tolidda Machine
Shoe 3D Upper Tolidda Machine
Shoes 3D Upper Tolidda
3D Upper Tolidda Qalabka Shoe
3D Vamp / Shoe Upper Tolidda Machine
Custom Design Tolidda Machine-saareyaasha
Shoe Custom Design Upper Tolidda Machine
Fashion Dhogor Machine Tolidda funaanad
Flat Machine Tolidda Automatic
Flat Jacquard Tolidda Machine
Si buuxda Jacquard funaanad Tolidda Machine
Jacquard Flat Tolidda Machine
3D Machine tolida
Tolida Machine Waayo Hat Dhogor
Tolidda Machine dun dhogor idaad
Uppers Shoe mesh xidhantay
Ningbo Shuangyu / Samewe 3D Vamp / Shoe Upper Flat Tolidda Machine
Machine Shoe Making sare
Shuangyu / Samewe 3D Vamp / Shoe Upper Flat Tolidda Machine
funaanad Knniting Machines
Machine Tolidda Dhogor
Dhogor funaanad Machine Tolidda